आजको राशिफल - भदौ २१ गते बिहीबार (भिडियो सहित) - Pokhara News
होमपेज/राशिफल/आजको राशिफल – भदौ २१ गते बिहीबार (भिडियो सहित)
आजको राशिफल – भदौ २१ गते बिहीबार (भिडियो सहित)
पोखरा न्युज भाद्र २१, २०७५
पोखरा न्यूज- २१, भदौ ।
आज वि.सं. २०७५ भदौ २१ गते बिहीबार तदनुसार ई. सं. २०१८ सेप्टेम्बर ०६ तारिख, भाद्रपद कृष्ण एकादशी, पुनर्वसु नक्षत्र, मिथुन राशिको चन्द्रमा, वरीयान् योग, बालब र कौलव करण
आजको चाडपर्व र उत्सव : अजा एकादशी व्रत,
आजको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), अग्निवास(होमादि), कलशचक्र,
भोलिको चाडपर्व र उत्सव : शुक्र प्रदोष व्रत, जुग यँ पञ्चदान, निजामती कर्मचारी दिवस,
भोलिको मूहुर्त : रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), शिलान्यास (सामान्य), द्रव्यप्रयोग वा लगानी, डेरा सर्ने, दैलो राख्ने, कलशचक्र,
राहु काल : दिउँसो ०१:३६ देखि ०३:१० सम्म
यमघण्ट : बिहान ०५:४४ देखि ०७:१८ सम्म
गुलिक काल : बिहान ०८:५३ देखि १०:२७ सम्म
काल वारवेला : दिउँसो ०३:१० देखि ०४:४४ सम्म
रोग वारवेला : बिहान ०७:१८ देखि ०८:५३ सम्म
शुभ वारवेला : साँझ ०४:४४ देखि ०७:४४ सम्म
लाभ वारवेला : दिउँसो १२:०१ देखि ०१:३६ सम्म
भोलि कतै यात्रा गर्ने उपयुक्त साइतको खोजीमा हुनुहुन्छ भने पुरुषको नेतृत्वमा पश्चिम र उत्तर दिशाको तथा स्त्रीको नेतृत्वमा ईशान (उत्तरपूर्व) र आग्नेय (दक्षिणपूर्व) दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ । तर बाध्यतावश यात्रामा निस्कनै पर्ने छ भने अमिलोपिरो चटपटे खानेकुरा वा जौ खाएर जुनसुकै दिशाको यात्रा गरेमा पनि शुभफल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।
चन्द्रमा चौथो घरमा भए पनि आज शुभ ग्रहको दृष्टि पर्नाले दिन बलियो भएको छ । बिहान सामाजिक र परोपकारका क्षेत्रमा खट्दा मनमा आनन्दको अनुभूति हुनेछ । दिउँसोबाट पारिवारिक र घरायसी प्रयोजनमा समय दिइने छ । खर्च बढे पनि घरायसी सुखसुविधाका सामाग्रीको जोहो हुनेछ । बन्दव्यापारमा लाभै हुनेछ । प्रेमसम्बन्धमा सुधार आउने छ । आमाबुवाको स्वास्थ्यमा सुधार आउने छ । आफन्त, सहयोगी र मित्रवर्गको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हुनसक्छ । गोपनीय ढङ्गले गरिएको क्रियाकलापमा सफलता पाउनु हुनेछ । परिवारमा रमाइलो जमघट हुनेछ र अभिभावकले सन्तुष्टि जनाउने छन् ।
आज पराक्रम भावमा कमजोर चन्द्रमा बसेको दिन छ, त्यसैले मिश्रित प्रभाव प्राप्त हुनेछ । खानपानको समयमा बदलाव आउने छ । बन्द व्यापार र कृषिक्षेत्रमा मध्यम छ । धार्मिक, सामाजिक र परोपकारी काममा दौडधूप गर्नुपर्ने छ । सामाजिक काममा मरिहत्ते गरी खट्दासमेत चाहेको परिणाम नआउनाले दिक्क लाग्नेछ । कताकता भाग्यलाई दोष दिन मन लाग्नेछ । मनमा वैराग्यको भावना पलाउन सक्छ र आध्यात्मिक र दार्शनिक भावनाको विकास हुनेछ । आज गरिएको परोपकारको कामबाट रोकिएको काम बन्न सक्छ । दाजुभाइ वा नजिकका मित्रले सकेको सहयोग र सद्भाव प्रदान गर्नेछन् ।
दिनभरि सातौं भावमा कमजोर चन्द्रमा भएकाले आज दाम्पत्य जीवन वा प्रेमप्रसङ्गमा निरसता आउने छ । दिनको सुरुमा केही झैझगडा र विवादको सम्भावना पनि हुन्छ । त्यसैले तर्कवितर्क र विवाद वा झैझगडामा सतर्क रहनु बेस हुन्छ । सामाजिक क्षेत्रमा गएको धनबाट प्रतिफल नआए पनि सुखसुविधा बढाउन र धनप्राप्तिका लागि गरिएको प्रयास सफल हुनेछ । मायाप्रेम, रतिराग र विलासिताका भावना बारम्बार आइरहने हुनाले मन अस्थिर र अशान्त बन्नेछ । सन्तानपक्षमा राम्रै छ । पेसा वा व्यवसायमा समय दिन सकेमा लाभ नै हुनेछ । साँझमा रामरमाइलो र मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा ध्यान आकृष्ट हुनेछ ।
प्रातःकालमा एक्लोपन र निराशा बढ्नाले मन एकतमासको हुनेछ । तर मूलतः आज बौद्धिक, साहित्यिक र सिर्जनात्मक क्षेत्रमा समय र धन लगानी गर्ने समय छ । त्यसैले बौद्धिक क्रियाकलाप, दर्शन र चिन्तनप्रति जसरी भएपनि समय निकाल्न सके राम्रो हुन्छ । हुन त पठनपाठनमा रुचि नभए झैं र सृजनात्मक क्षमतामा कमी भए झैं लाग्नेछ, तथापि बौद्धिक क्षमता राम्रो रहने छ । तत्काल योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुनेछ तर अध्ययन, अध्यापन र लेखनकार्यमा गरिएको मिहिनेतले पछि काम गर्नसक्छ । प्राविधिक काममा ठूलो सफलता नमिल्न सक्छ । छोराछोरीका समस्यामा केन्द्रित हुनुपर्ने दिन छ ।
लामाचौर तिज महोत्सव पृथक महोत्सब हो - प्रचार संयोजक भण्डारी
प्याराग्लाइडिङ पदक विजेता प्रत्येक खेलाडीलाई गण्डकी प्रदेशले एक लाख दिने